(ကင်ညာ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဆောင်ပုဒ်: Let us all pull together
နိုင်ငံတော် သီချင်း: O God of All Creation
သမ္မတတစ်ပိုင်း ဦးဆောင်သော သမ္မတနိုင်ငံ
၅၈၀,၃၆၇ km² (၂၂၄,၀၈၀ sq mi) (အဆင့်: ၄၇)
၄၁,၀၀၀,၀၀၀ (၂၀၁၁) (အဆင့် - ၃၃)
၆၇.၂/km² (၁၇၄.၁/စတုရန်းမိုင်) (အဆင့် - ၁၄၀)
နိမ့် · ၁၂၈
ကင်ညာနိုင်ငံသည် ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ နှင့် တန်ဇေးနီးယားနိုင်ငံတို့နှင့် အတူ သားရိုင်းတိရိစ္ဆာန် ကြည့်ရှုရန် အတွက် ထင်ရှားပြီး အရှေ့နှင့်အနောက် ဆာဗို အမျိုးသား ဥယျာဉ်၊ မာဆိုင်းမာရာ ၊ နာကူရူးကန် အမျိုးသား ဥယျာဉ်၊ အာဘာဒဲ အမျိုးသား ဥယျာဉ် အစရှိသည့် တောရိုင်း တိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းရေး ဒေသနှင့် အမျိုးသားဥယျာဉ်များကြောင့်လည်း ထင်ရှားသည်။ ထို့ပြင် လာမူး ကဲ့သို့သော ကမ္ဘာ့အမွေခံနေရာများ လည်း ရှိပြီး နိုင်ငံတကာ ရွက်လှေပြိုင်ပွဲ နှစ်စဉ်ကျင်းပရာ ဖြစ်သော ကီလီဖီ ကမ်းခြေ ကဲ့သို့သော ကမ္ဘာကျော် ကမ်းခြေများလည်း ရှိသည်။
မြို့တော် နိုင်ရိုဘီမြို့မှာ ဒေသအတွင်း စီးပွားရေး အချက်အခြာ နေရာ ဖြစ်သည်။ ကင်ညာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမှာ အရှေ့တောင် အာဖရိကနှင့် အလယ်အာဖရိကတွင် စုစုပေါင်း ပြည်တွင်း ထုတ်ကုန် အားဖြင့် အကြီးမားဆုံး ဖြစ်သည်။  စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမှာ အဓိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး ရှေးယခင်ကတည်းက လက်ဖက် နှင့် ကော်ဖီတို့ကို အဓိက တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ဥရောပသို့ ပန်း များ တင်ပို့ရောင်းချလျှက် ရှိသည်။ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းမှာလည်း နိုင်ငံ၏ အဓိက စီးပွားရေး မောင်းနှင်အား တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ ကင်ညာသည် အရှေ့အာဖရိက အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည်။ အခြားသော အာဖရိကနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ကင်ညာတွင် နိုင်ငံရေး နှင့် စီးပွားရေး ပိုမို တည်ငြိမ်မှု ရှိသည်။
ဆွာဟီလီ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ကုန်သွယ်ရေး (၁ ရာစုမှ ၁၉ ရာစု အထိ)ပြင်ဆင်
ရထားလမ်း ဖောက်လုပ်နေစဉ်တွင် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်သည့် လုပ်သားများ အတွက် အိန္ဒိယ တိုင်းရင်းသား အမြောက်အများ ဝင်ရောက် လာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ သားစဉ်မြေးဆက် အိန္ဒိယသားများမှာ ကင်ညာနိုင်ငံတွင် ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပြီး နောင်တွင် အစ်စမေးလ် မူဆလင် နှင့် ဆစ်ခ် အစရှိသော ကင်ညာရှိ သိသာထင်ရှားသော အိန္ဒိယ အုပ်စုများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဗွန်လက်တောင်း ကို ဖမ်းမိနိုင်ရန်အတွက် ဗြိတိသျှ တို့သည် အိန္ဒိယမှ ဗြိတိသျှ အိန္ဒိယ စစ်တပ်ကို ပို့လွှတ်ခဲ့ပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် ကုန်းတွင်းပိုင်းကျသော နေရာများမှ ရိက္ခာများကို သယ်ပို့နိုင်ရန် အထမ်းသမား အမြောက်အများကို အသုံးပြုခဲ့ရသည်။ ကယ်ရီယာကော့ပ် ဟုခေါ်သော စစ်တပ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အာဖရိကသား ၄ သိန်းကျော်ကို အသုံးပြုခဲ့ရာ ထိုသူတို့၏ ရေရှည် နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှု အတွက် အထောက်အပံ့ တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။
မောမော ပုန်ကန်မှု (၁၉၅၂-၁၉၅၉)ပြင်ဆင်
၁၉၅၀ ခုနှစ်များ အတွင်းက ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီစနစ်ကို ပုန်ကန်တိုက်ခိုက်ခဲ့သော ကင်ညာ မောမော သူပုန် ခေါင်းဆောင် ဒီဒန် ကီမာသီ၏ ရုပ်ထု
လွတ်လပ်သော ကင်ညာနိုင်ငံ (၁၉၆၃)ပြင်ဆင်
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကင်ညာစစ်တပ်မှ မြောက်ပိုင်းနယ်စပ် ခရိုင်တွင် နေထိုင်ပြီး မြောက်ဘက် ဆိုမာလီ သမ္မတနိုင်ငံရှိ သူတို့၏ မျိုးနွယ်တူများနှင့် ပူးပေါင်းချင်သော ဆိုမာလီ သူပုန်များနှင့် ရှီဖတာစစ်ပွဲကို ဆင်နွှဲရသည်။ ၁၉၆၇ အောက်တိုဘာလ အာရှုရာ ကြေငြာချက်ဖြင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို သဘောတူနိုင်ခဲ့သော်လည်း ၁၉၆၉ ခုနှစ်အထိ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု မရှိဘဲ ဖြစ်နေခဲ့သည်။နောက်ထပ် ကျူးကျော် ဝင်ရောက်မှုများကို တွန်းလှန်နိုင်ရန် အတွက် ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် ကင်ညာသည် အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံနှင့် ကာကွယ်ရေး သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီး ယခုထိတိုင် အသက်ဝင်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
၁၉၆၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်တွင် ကင်ညာသမ္မတနိုင်ငံ အဖြစ်ကြေငြာခဲ့ပြီး ဂျိုမို ကင်ညတ်တာသည် ကင်ညာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး သမ္မတ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
မအောင်မြင်သော အာဏာသိမ်းမှုမှာ လေတပ်မှ ရာထူးငယ်သော ဝါရင့် တပ်သား အဆင့်ရှိ ဟဲဇာကိုင်းယား အိုချူ ကာမှ ဦးဆောင်စီမံ၍ လေတပ် အတွင်းမှ စစ်မှုထမ်း အမိန့်ဖြင့် ဝင်ရောက်နေသော တပ်သားများ အဓိက ပါဝင်သည်။ အာဏာသိမ်းရန် ကြံစည်မှုကို ဆိုမာလီ စစ်ဘက် အရာရှိဟောင်း ဖြစ်သော စစ်ဦးစီးချုပ် မာမု မိုဟာမက် ဦးဆောင်သော တပ်များ မှ လျှင်မြန်စွာ နှိမ်နင်း နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုတပ်ဖွဲ့များတွင် ရဲဘက်မှ စစ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ ပါဝင်သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် လျို့ဝှက်မဲပေးစနစ် အစား မဲပေးသူများက မိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်သော အမတ်၏ နောက်တွင် တန်းစီသည့် စနစ်ကို ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ထိုအချက်ကြောင့် ဒီမိုကရေစီ မဆန်သော အစိုးရ၏ သရုပ်ကို အမြင့်မားဆုံး ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် လှုပ်ရှားမှုများ အနှံ့အပြား ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပါတီတစ်ခုတည်းကိုသာ ခွင့်ပြုသော ပုဒ်မ အပါအဝင် အခြား အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ပုဒ်မ အများအပြားကို ရွေးကောက်ပွဲပြီး နှစ်များတွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ် နှင့် ၁၉၉၇ ခုနှစ် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ဒင်နီယယ် အာရပ် မွိုင် ပင် ပြန်လည် အရွေးခံခဲ့ရသည်။
သမ္မတ မွိုင်း ကီဘာကီ လက်ထက်တွင် အာဏာရလာသော ညွန့်ပေါင်း အစိုးရသစ်သည် စီးပွားရေး တိုးတက်မှု ဖြစ်ပေါ်ရန်၊ ခြစားမှု တိုက်ဖျက်ရန်၊ ပညာရေး တိုးမြှင့်ရန် နှင့် အခြေခံ ဥပဒေကို ပြန်လည်ရေးဆွဲရန် ကိစ္စရပ်များကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်မည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။ အချို့သော ကတိများသာ လက်တွေ့ အကောင်အထည် ပေါ်လာခဲ့သည်။ မူလတန်း ပညာရေးမှာ အခမဲ့ ဖြစ်လာသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ စ၍ အထက်တန်း ပညာရေး အတွက် ကုန်ကျ စရိတ်ကို အစိုးရမှ များစွာ ထောက်ပံ့မည် ဟု အစိုးရမှ ကြေငြာချက် ထုတ်ခဲ့ပြီး အစိုးရမှ ကျောင်းလခ အားလုံးကို ပေးခဲ့သည်။ 
သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲတွင်မှု လက်ရှိသမ္မတ ကီဘာကီသည် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီမှ နေ၍ ပြန်လည်အရွေးခံရန် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ပြိုင်ဘက်မှာ အဓိက အတိုက်အခံ ပါတီဖြစ်သော လိမ္မော်ရောင် ဒီမိုကရက်တစ် လှုပ်ရှားမှု ပါတီ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာ လေ့လာသူများက ရွေးကောက်ပွဲသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံနှုန်း မမီ ဟု ပြောဆို ဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။ လိမ္မော်ရောင် ဒီမိုကရက်တစ် လှုပ်ရှားမှု ပါတီ နှစ်ခြမ်းကွဲခဲ့ပြီး အသစ်ဖွဲ့စည်းသော လိမ္မော်ရောင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ-ကင်ညာမှ အရွေးခံသူ ကာလွန်ဇို မတ်စ်ယိုကာ ထံသို့ အရေးပါသော မဲအရေအတွက် ၈ ရာခိုင်နှုန်း ပါသွားခဲ့ပြီးနောက် အပြီးသတ် ယှဉ်ပြိုင်မှုမှာ လိမ္မော်ရောင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ အရွေးခံသူ ရိုင်လာ အိုဒင်ဂါနှင့် ကီဘာကီတို့ နှစ်ဦးသာ ဖြစ်သည်။ ကင်ညာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဌာနချုပ်တွင် မဲရေတွက်နေစဉ် အိုဒင်ဂါ ထောက်ခံသူများသော မဲဆန္ဒနယ်မှ မဲများ ဦးစွာ ရောက်ရှိလာသဖြင့် အိုဒင်ဂါ မှာ ပထမတွင် မသိမသာ မဲ အသာရနေခဲ့ပြီး နောက်တွင် သိသိသာသာ မဲ အသာရလာခဲ့သည်။ မဲများကို ဆက်လက်ရေတွက်နေခဲ့ပြီးနောက် ကီဘာကီ ထောက်ခံသူများသော မဲဆန္ဒနယ်မှ မဲများ ရောက်လာသော အခါတွင် ကီဘာကီမှ မဲ အရေအတွက် အမီလိုက်လာခဲ့ပြီးနောက် သိသိသာသာ ကျော်တက်သွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကင်ညာရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ လုပ်ဆောင်ချက် မှားယွင်းသည်ဟု ဆိုပြီး ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အိုဒင်ဂါက မိမိဘာသာ ပြည်သူ့ သမ္မတ ဟု ကြေငြာခဲ့ပြီး မဲပြန်လည်ရေတွက်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
မဟာ ညွန့်ပေါင်း အစိုးရပြင်ဆင်
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၃ ရက်တွင် သမ္မတ ကီဘာကီသည် ဝန်ကြီး ၄၁ ဦးပါဝင်သော မဟာ ညွန့်ပေါင်း အစိုးရအဖွဲ့ကို ကြေငြာခဲ့ပြီး ထိုအဖွဲ့တွင် ဝန်ကြီးချုပ် နှင့် ၎င်း၏ လက်ထောက် ဝန်ကြီးချုပ် နှစ်ဦး ပါဝင်သည်။ ဒု-ဝန်ကြီး ၅၀ ဦး အပါအဝင် အစိုးရ အဖွဲ့သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၇ ရက်တွင် နိုင်ရိုဘီမြို့ နိုင်ငံတော် အိမ်တော်တွင် ဒေါက်တာ ကိုဖီ အာနန်း နှင့် အခြား ဖိတ်ကြားထားသော ဂုဏ်သရေရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ရှေ့မှောက်တွင် ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုခဲ့သည်။
ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးကို ဖယ်ရှားရန် နှင့် တစ်ချိန်တည်းတွင်သမ္မတ၏ အခွင့်အာဏာကို လျှော့ချရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြောင်းလဲရန် စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၄ ရက်တွင် ပြင်ဆင်ရန် လျာထားသော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအတွက် ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပြွ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အသစ်မှာ ထောက်ခံမဲ အများအပြား အသာရပြီး အတည်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တခြားပြင်ဆင်ချက်များ နှင့် အတူ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အသစ်တွင် ဒေသခံ အစိုးရများသို့ အခွင့်အာဏာ ပိုမိုပေးအပ်ခဲ့ပြီး ကင်ညာနိုင်ငံသားတို့အား နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးများ ပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့သည်။ ထို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၇ ရက်တွင် နိုင်ရိုဘီမြို့ အူဟူရူ ဥယျာဉ်တွင် အမြောက် ၂၁ ချက် ပစ်ဖောက် ဂုဏ်ပြုမှု အပါအဝင် ပျော်ရွှင်ဖွယ် အခမ်းအနား အဖြစ် တရားဝင် အတည်ပြု ကြေငြာခဲ့သည်။ ထို အခမ်းအနားကို အာဖရိက ခေါင်းဆောင် အများအပြားက ချီးမြှောက်ခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝန်းမှ ချီးကျူးခဲ့ကြသည်။ ထိုနေ့မှ စ၍ ဒုတိယ သမ္မတနိုင်ငံတော်၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အသက်ဝင်လာခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ရွေးကောက်ပွဲများနှင့် အစိုးရသစ်ပြင်ဆင်
နိုင်ငံတကာ ခေါင်းဆောင်များ လည်ပတ်ခြင်းပြင်ဆင်
ကင်ညာနိုင်ငံသည် အရှေ့နှင့် အလယ်အာဖရိကတွင် အကြီးဆုံးနှင့် အတိုးတက်ဆုံး စီးပွားရေး ရှိသောနိုင်ငံ ဖြစ်သော်လည်း ကြွယ်ဝသော မြို့နေ လူဦးရေ တချို့တဝက်ကြောင့် ကင်ညာနိုင်ငံအား ချမ်းသာသောနိုင်ငံဟု အထင်ရောက်စရာ ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ကင်ညာနိုင်ငံသည် ဆင်းရဲသော ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံ တစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးညွှန်းကိန်းနိုင်ငံများစာရင်း အားဖြင့် ၀.၅၁၉ မျှသာ ရှိ၍ နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၆ နိုင်ငံတွင် အဆင့် ၁၄၅ မျှသာ ရှိကာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အနိမ့်ကျဆုံး နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းသော ကင်ညာနိုင်ငံသားတို့မှာ လုံးဝ ဆင်းရဲမွဲတေလျှက် ရှိကြသည်။ အရေးပါသော စိုက်ပျိုးမွေမြူရေး ကဏ္ဍမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံး ဖြစ်ပြီး ထုတ်ကုန် စွမ်းရည်ပြည့်ဝမှု မရှိပေ။ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသော အလုပ်သမားတို့ ထိုကဏ္ဍတွင် လုပ်ကိုင်လျှက် ရှိကြသဖြင့် အစားအသောက် ဖူလုံပြီး ဖွံ့ဖြိုးသော နိုင်ငံများ၏ အလုပ်သမား ၃ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ယှဉ်လျှင် အလွန်များပြားလှသည်။
အရှေ့နှင့် အလယ်အာဖရိကရှိ အကြီးမားဆုံး စီးပွားရေး ရှိသော နိုင်ငံမှာ ဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍ၌ ကြောက်မခန်းလိလိ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ယခင် ဆယ်စုနှစ် အတွင်းက အလျှင်အမြန် တိုးချဲ့လာသော ဆက်သွယ်ရေး နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကြောင့် ဖြစ်ကာ ယခုတွင် စုစုပေါင်း ပြည်တွင်း ထုတ်ကုန်၏ ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းကို ပံ့ပိုးပေးလျှက် ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းမျှ သော စုစုပေါင်း ပြည်တွင်း ထုတ်ကုန်များမှာ စိတ်မချရသော စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ကဏ္ဍမှ ထွက်ပေါ်လာပြီး ထိုကဏ္ဍတွင် ပြည်တွင်း အလုပ်သမား၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း လုပ်ကိုင်လျှက် ရှိသည်။ (စီးပွားရေး နိမ့်ကျသော နိုင်ငံများတွင် တွေ့ရတတ်သော စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု အတွက် အဓိက တွန်းအားဖြစ်သော အစားအသောက် လုံခြုံမှု မရှိခြင်း ဖြစ်သည်။) နိုင်ငံ လူဦးရေ အတော်များများမှာ ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုနှင့် အမြဲကြုံတွေ့နေရပြီး အစားအသောက် အထောက်အပံ့များပေါ်တွင် များစွာ မှီခိုနေရသည်။ စက်ရုံနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းမှာ စုစုပေါင်း ပြည်တွင်း ထုတ်ကုန်၏ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းမျှသာ ရှိပြီး အသေးငယ်ဆုံးသော ကဏ္ဍ ဖြစ်သည်။
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းသည် ကင်ညာနိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းထုတ်ကုန် (ဂျီဒီပီ) အား ဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍ ပြီးလျှင် ဒုတိယမြောက် အများဆုံး ပံ့ပိုးသည့် ကဏ္ဍ ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် သစ်တော လုပ်ငန်းနှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အပါအဝင် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းသည် ဂျီဒီပီ၏ ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းမျှ ရှိပြီး လစာရရှိသော အလုပ်သမား၏ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ပြည်ပပို့ကုန် အမြတ်ငွေ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း မျှ ရှိသည်။ အဓိက ဝင်ငွေရသော ကောက်ပဲသီးနှံများမှာ လက်ဖက်၊ ဟော်ရီကာချာ ကောက်ပဲသီးနှံများ နှင့် ကော်ဖီ တို့ ဖြစ်သည်။ ဟော်ရီကာချာ ကောက်ပဲသီးနှံများ နှင့် လက်ဖက်တို့သည် အဓိက ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာသော ကဏ္ဍများ ဖြစ်ပြီး ကင်ညာနိုင်ငံ ပြည်ပပို့ကုန်၏ တန်ဖိုးအများဆုံး နှစ်ခု ဖြစ်သည်။ အစားအသောက်အတွက် အဓိက ဖြစ်သော ပြောင်းကဲ့သို့သော အသီးအနှံများမှာ ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲပေါ် များစွာ မူတည်နေသည်။ စိုက်ပျိုးနိုင်စွမ်း လျော့ကျမှုကြောင့် အစားအသောက် အကူအညီများ အခါအားလျော်စွာ လိုအပ်လျှက် ရှိသည်။ ဥပမာ အားဖြင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ် ကင်ညာနိုင်ငံ၏ မိုးခေါင်မှုကြောင့် လူ ၁.၈ သန်း အတွက် အစားအသောက် အကူအညီ လိုအပ်ခဲ့သည်။
လက်ဖက်၊ ကော်ဖီ၊ နာနတ်လျှော်၊ ဆေးဂန္ဓမာ ၊ ပြောင်းနှင့် ဂျုံတို့ကို အာဖရိကရှိ အအောင်မြင်ဆုံး စိုက်ပျိုးရေး ဒေသတစ်ခုဖြစ်သော မြေဩဇာကောင်းမွန်သည့် ကုန်းမြင့်ဒေသများတွင် စိုက်ပျိုးကြသည်။ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများမှာ ခြောက်သွေ့ဆန်သော ကန္တာရဒေသများ မှ မြောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း ဒေသများ အထိ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အုန်းသီး၊ နာနတ်သီး၊ သီဟိုဠ်စေ့၊ ချည်၊ ကြံ၊ နာနတ်လျှော် နှင့် ပြောင်း တို့ကို မြေနိမ့်ဒေသများတွင် စိုက်ပျိုးကြသည်။ သို့သော်လည်း ကင်ညာနိုင်ငံသည် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ကဏ္ဍတွင် အစားအစာ ဖူလုံမှုနှင့် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သော ဆင်းရဲမွဲတေမှုတိုကို ဖြေရှင်းရန် အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် ထိရောက်မှု အဆင့်တစ်ခုသို့ မတက်လှမ်းနိုင်သေးပေ။ ၅၃ ရာခိုင်နှုန်းသော နိုင်ငံသားများမှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှု စံသတ်မှတ်ချက်အောက် နိမ့်ကျနေကြပြီး နိုင်ငံသား အများအပြားမှာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းနှင့် အမြဲတစေ ကြုံတွေ့နေရပြီး အစားအသောက် အကူအညီ ပေါ်တွင် မှီခိုနေရသည်။ ဆိုးရွားသောလမ်းများ၊ မလုံလောက်သော ရထားလမ်းများ၊ ထိထိရောက်ရောက် အသုံးမပြုနိုင်သော ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး နှင့် ဈေးကြီးသော လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးတို့ကြောင့် ခြောက်သွေ့ ဒေသနှင့် ခြောက်သွေ့ဆန် ဒေသများကို ဝေးလံခေါင်းပါးသော ဒေသများ အဖြစ် တည်ရှိစေပြီး အချို့ဒေသများရှိ လယ်သမားများမှာ ဈေးကွက်သို့ မတင်ပို့နိုင်သဖြင့် အစားအသောက်များ လယ်ကွင်းအတွင်း၌ပင် ပုပ်သိုးပျက်စီးခြင်းနှင့် ကြုံတွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်၂၀၁၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ နှင့် စက်တင်ဘာလ နောက်ပိုင်းတွင် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့မှ ကင်ညာအတွက် ကင်ညာနိုင်ငံသားများ အမည်ရသော အစီအစဉ်ကို စတင်ခဲ့သည်။
ကင်ညာနိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် အများစုမှာ တာနာမြစ် အထက်ပိုင်း ဆည်များနှင့် အနောက်ဘက် တာကွယ်ချောက်ဆည် ရှိ ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံများမှ လာသည်။ ကျန်ရှိသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများကို ကမ်းရိုးတန်းပေါ်ရှိ လောင်စာဆီသုံး လျှပ်စစ် စက်ရုံ၊ နိုင်ရိုဘီမြို့ အနီး အော်လ်ကယ်ရီးယားရှိ မြေကြီးအပူချိန်သုံး လျှပ်စစ် စက်ရုံ နှင့် ယူဂန်းဒါးနိုင်ငံမှ တင်သွင်းခြင်းတို့ ဖြင့် ရရှိသည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၃ ခုနှစ် အတွင်းတွင် ကင်ညာရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အသုံးပြုမှုမှာ ၁,၁၄၂ မက်ဂါဝပ် ရှိသည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်က ကင်ညာပါဝါ ကုမ္ပဏီ အမည်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော နိုင်ငံပိုင် ကင်ညာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှုကို လုပ်ဆောင်ပြီး ကင်ညာပါဝါ ကုမ္ပဏီက နိုင်ငံအတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လွှတ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းကို လုပ်ဆောင်သည်။ မိုးခေါင်မှုကြောင့် ရေစီးလျော့နည်းသည့် အခါတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မလုံလောက်မှုနှင့် အမြဲတစေ ကြုံတွေ့ရလေ့ ရှိသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်ရန် အတွက် ကင်ညာနိုင်ငံမှ နျူးကလီးယား စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စက်ရုံကို ၂၀၁၇ တွင် တည်ဆောက်နိုင်ရန် ရည်မှန်းလျှက် ရှိသည်။
ကင်ညာနိုင်ငံ တာကာနာ တွင် ရေနံများ ရှိကြောင့် သက်သေအခိုင်အမာ ရှိပြီး စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဟု လတ်တလော တွေ့ရှိထားသည်။ တူလ်လိုး ရေနံ ကုမ္ပဏီမှ ခန့်မှန်းချက်အရ ကင်ညာတွင် ရေနံ စုစုပေါင်း ၁၀ ဘီလီယံ စည်ခန့် ရှိမည်ဟု ဆိုသည်။ အခြား ရေနံထွက်ရှိသော ဒေသများ ရှိမရှိကို ဆက်လက် ရှာဖွေလျှက် ရှိသည်။ ကင်ညာနိုင်ငံသည် လက်ရှိတွင် လိုအပ်သော လောင်စာဆီကြမ်းများကို တင်သွင်းလျှက် ရှိသည်။ အရှေ့အာဖရိက၏ အကြီးဆုံး စီးပွားရေး ရှိသော ကင်ညာနိုင်ငံတွင် မဟာဗျူဟာမြောက် ရေနံ ထိန်းသိမ်းဖယ်ချန်မှု မရှိပဲ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ ၂၁ ရက်စာ ဆီ ထိန်းသိမ်းဖယ်ချန်ခြင်းသာ ရှိသည်။ လောင်စာဆီ တင်သွင်းမှုမှာ နိုင်ငံ သွင်းကုန်၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ရှိသည်။
တရုတ်တို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် ကုန်သွယ်ရေးပြင်ဆင်
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ကင်ညာ အစိုးရသည် ဗွီးရှင်း ၂၀၃၀ ဟုအမည်ရသော စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီအစဉ်ကို ဖော်ထုတ် ကြေငြာခဲ့ပြီး ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် အာရှကျားများ နှင့် တန်းတူ ဖြစ်ရန် ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသား ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု လုပ်ဆောင်ချက် အစီအစဉ်ကို စတင်ခဲ့ပြီး ဗွီးရှင်း ၂၀၃၀တွင် ရာသီဥတု အပြောင်းလဲကို အဓိက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အချက်အဖြစ်မှ ဖယ်ချန် ထားခဲ့ခြင်းမှာ လစ်ဟာမှုသာ ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြု ကြေငြာခဲ့သည်။ စာမျက်နှာ ၂၀၀ မျှ ရှိသော အစီအစဉ်ကို ရာသီဥတုနှင့် ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာ အသိပညာ ကွန်ယက်၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ကင်ညာ အစိုးရ၏ ဗွီးရှင်းအဖြစ် ကာဗွန်ပမာဏ အနည်းငယ်ဖြင့် ရာသီဥတုကို မထိခိုက်စေဘဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့် လမ်းကြောင်းကို ချပြခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အစီအစဉ် ကို ဖော်ထုတ်ပြသရာတွင် စီမံကိန်း၊ အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့် ဗွီးရှင်း ၂၀၃၀ ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ကြီးမှ အသစ်ပြောင်းလဲရေးဆွဲသော အစီအစဉ်တွင် ရာသီဥတုနှင့် ဆိုင်သော ကိစ္စသည် အဓိကကျသော အစိတ်အပိုင်း ဖြ်စမည်ဟု အလေးအနက် ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် တိုက်ရိုက် ဖြစ်ပြီး ခိုင်မာသော အစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆိုင်ရာ အခြေခံကို ဖန်တီးနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုကို စီးပွားရေး တစ်ခုလုံးနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသော ကိစ္စအဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဟုလည်း အသေအချာ ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ် ၁၅.၃% ၊ အိန္ဒိယ ၁၃.၈%၊ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ၁၀.၅%၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ ၇.၃%၊ တောင်အာဖရိက ၅.၅%၊ ဂျပန် ၄.၀% (၂၀၁၂)
ကင်ညာနိုင်ငံ တာကာနာ ကောင်တီတွင် ရေနံများ ရှိသည်ဟု အခို်ငအမာ သက်သေရှိသည်။ သမ္မတ မွိုင် ကီဘာကီက ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂၆ ရက်တွင် အင်ဂလို-အိုင်းရစ်ရှ် ကုမ္ပဏီ ရေနံ ရှာဖွေရေး ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်သော တာလိုး ရေနံကုမ္ပဏီက ရေနံများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍မူ ၃ နှစ်ခန့် လေ့လာပြီးမှ အတည်ပြုရမည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။
ကလေးအလုပ်သမားနှင့် ပြည့်တန်ဆာ ပြဿနာပြင်ဆင်
စီအိုင်အေ ကမ္ဘာ့အချက်အလက်များ စာအုပ်အရ နိုင်ငံအတွင်းရှိ လူမျိုးစုများမှာ ကီကူရူး ၂၂% ၊ လူယာ ၁၄% ၊ လူယို ၁၃% ၊ ကလန်ဂျင်း ၁၂ % ၊ ကမ်ဘာ ၁၁% ၊ ကီစီး ၆% ၊ အခြား အာဖရိကသား ၁၅% နှင့် အာဖရိကသား မဟုတ်သော အာရှ၊ ဥရောပနှင့် အာရပ်လူမျိုးများမှာ ၁% တို့ ဖြစ်ကြသည်။
နိုင်ငံအတွင်းရှိ လူဦးရေ အများစုမှာ လူငယ်များဖြစ်ပြီး ၇၃% သော နေထိုင်သူများမှာ အသက်၃၀ အောက် ဖြစ်ကြကာ လူဦးရေတိုးနှုန်း လျှင်မြန်လျှက် ရှိသည်။ယခင် ရာစုနှစ် အတွင်း ၂.၉ သန်းမှ သန်း ၄၀ သို့ တိုးပွားလာသည်။
အခြားသော ဘာသာ ယုံကြည်သက်ဝင်သူများမှာလည်း အတော်အသင့် ရှိပြီး မွတ်စလင် ၁၁.၂% ၊ ဘာသာမဲ့ ၂.၄% နှင့် အာဖရိက ရိုးရာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူ ၁.၇% ရှိသည်။ ကင်ညာ၏ မွတ်စလင် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကမ်းရိုးတန်း ဒေသများတွင် နေထိုင်ကြပြီး ထိုဒေသရှိ လူဦးရေ၏ ၅၀% ဖြစ်သည်။ မွတ်စလင် ၄ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အာ့မဒီယာ ဖြစ်ပြီး၊ ၈ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ရှီယာ့ ဖြစ်ကာ အခြားသော ၈ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဂိုဏ်းမရှိသော မွတ်စလင်များ ဖြစ်၍ ၇၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဆွန်နီ မူစလင်များ ဖြစ်သည်။ ကမ်းရိုးတန်း ဒေသ၏ အနောက်ပိုင်း ဒေသများမှာ ခရစ်ယာန် အများစု ဖြစ်သည်။ ကင်ညာနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းဒေသ၏ အပေါ်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံအတွင်း မူစလင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း နေထိုင်ရာ ဒေသဖြစ်ပြီး ထိုဒေသတွ်င လူများစု ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ အဖြစ် တည်ရှိသည်။ထို့အပြင် ကင်ညာတွင် ဟိန္ဒူ လူဦးရေ အများအပြား ရှိပြီး ၃ သိန်းခန့် ဖြစ်ကာ နိုင်ငံ အတွင်း စီးပွားရေးတွင် အချက်အချာ ကျသော နေရာမှ ပါဝင်ပတ်သက်နေသူများ ဖြစ်ကာ အိန္ဒိယမှ လာကြသူများ ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဗဟိုင်း ဘာသာဝင် အနည်းငယ်မျှ ရှိသည်။
ကျေးလက် နှင့် ဝန်ထမ်းမလုံလောက်သော မြို့ပြရှိ ဆေးပေးခန်း၊ ကျန်းမာရေး ဌာန နှင့် ပုဂ္ဂလိက ဆေးခန်းများသို့ လာရောက် ကုသကြသော လူနာ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကို သူနာပြုများက ကုသကြသည်။ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော ရောဂါများအတွက် ဆေးခန်း အရာရှိများ၊ ဆရာဝန်များ နှင့် အထူးကုများ ထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးကြသည်။ ကင်ညာနိုင်ငံ အမျိုးသား စာရင်းအင်း ဗျူရို၏ မှတ်တမ်းအရ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ကင်ညာနိုင်ငံ၌ လူဦးရေ ၄၃ သန်းအတွက် အသိအမှတ်ပြု သူနာပြု ၆၅,၀၀၀ ၊ ဆေးခန်း အရာရှိ ၈,၆၀၀ နှင့် ဆရာဝန် ၇,၀၀၀ ရှိသည်။ (ထိုစာရင်းတွင် သေဆုံးသွားသူများနှင့် ကျန်းမာရေး နယ်ပယ်တွင် ဆက်လက် မလုပ်ကိုင်တော့သူများ ပါဝင်သဖြင့် စာရင်းဇယား အမှန်မှာ ထိုထက် နည်းနိုင်သည်။
ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့် ဆိုင်သော ရောဂါများမှာ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့် ကြွယ်ဝမှု ဖြန့်ဝေခြင်း စသည်တို့နှင့် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေသည်။ ကင်ညာနိုင်ငံသား တစ်ဝက်ခန့်မှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှု သတ်မှတ်ချက်၏ အောက်တွင် နေထိုင်လျှက် ရှိကြသည်။ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သော ရောဂါများ ဖြစ်သည့် ငှက်ဖျား၊ ဟိတ်ချ်အိုင်ဗွီ/အေအိုင်ဒီအက်စ်၊ နျူမိုးနီးယား၊ ဝမ်းရောဂါနှင့် အာဟာရ ချို့တဲ့ခြင်းမှာ ကြီးစွာသော ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး ဖြစ်ပြီး ကလေးသူငယ်များကို အဓိက သေဆုံးစေသည့် အကြောင်းအရာ ဖြစ်ကာ သေဆုံးမှုများစွာ အတွက် တရားခံဖြစ်သည်။ အများနှင့် ဆိုင်ရော ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍတွင် ပေါ်လစီ မခိုင်မာခြင်း၊ အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း မလုံလောက်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှု အားနည်းခြင်း နှင့် ခေါင်းဆောင်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်းတို့သည် အဓိက အပြစ်တင်ရန် အချက်များ ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ခန့်မှန်းချက်အရ အိတ်ချ်အိုင်ဗွီတွေ့ရှိမှုမှာ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ ၆.၃% အထိ ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် UNAIDS ၏ အစီရင်ခံစာ အရ အိတ်ချ်အိုင်ဗွီ ပျံ့ပွားမှု နှင့် ဆက်စပ်၍ ကင်ညာတွင် တိုးတက်မှုများ ရှိလာပြီး အိတ်ချ်အိုင်ဗွီတွေ့ရှိမှုမှာ အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်အတွင်း လူငယ်များ နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများတွင် လျော့နည်းလာသည်ဟု ဆိုသည်။
လက်ရှိ ၈-၄-၄ စနစ်ကို ၁၉၈၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် စတင်ခဲ့သည်။ ထိုစနစ်မှ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဘာသာရပ်များကို အလေးအနက် ထားခဲ့ပြီး စနစ်သည် အနေဖြင့် ကျောင်းမှ ထွက်သွားသူများ အနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် သို့မဟုတ် အရပ်ဘက် ကဏ္ဍများတွင် အလုပ်ရရှိနိုင်ရန် အတွက် ယူဆ အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ကင်ညာ အစိုးရမှ မူလတန်း အခမဲ့ ပညာရေးကို ကြေငြာခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် မူလတန်းတွင် ကျောင်းအပ်သူ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အထက်တန်းနှင့် အဆင့်မြင့်တန်း ပညာရေး အတွက်မူ ကျောင်းလခ ပေးရန် လိုအပ်နေသေးသဖြင့် ကျောင်းအပ်မှု သိသာစွာ များပြားမလာပေ။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် အစိုးရမှ ကျောင်းလခ အားလုံးကို အကုန်ခံပြီး အထက်တန်းပညာရေးကို အထောက်အပံ့များစွာ ပေးမည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။
ပေါင်းစပ် ဝင်ခွင့် စိစစ်ရေး အဖွဲ့မှာ အစိုးရ တက္ကသိုလ်များသို့ တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသားများကို ရွေးချယ်ရန် ဖြစ်သည်။ အစိုးရ ကျောင်းများ အပြင် နိုင်ငံ အတွင်း ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းပေါင်းများစွာ ရှိပြီး အများစုမှာ မြို့ပြတွင် ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ နိုင်ငံတကာကျောင်း အချို့လည်း ရှိပြီး ကင်ညာနိုင်ငံ ပြည်ပမှ ပညာရေး စနစ် အမျိုးမျိုးတို့ကို သင်ကြားပေးလျှက် ရှိသည်။
ထို့ပြင် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ စာပေဂျာနယ် တစ်ခု ဖြစ်သော ကွာနီ သည် ခေတ်ပြိုင် စာပေများကို ထုတ်ဝေလျှက် ရှိသည်။
ကင်ညာနိုင်ငံသည် အာကစား အများအပြားကို လုပ်ဆောင်ကြပြီး ၎င်းတို့ထဲတွင် ခရစ်ကက်၊ ကားပြိုင်ခြင်း၊ ဘောလုံး၊ ရပ်ဂ်ဘီ နှင့် လက်ဝှေ့တို့ ပါဝင်သည်။ သို့သော်လည်း ကင်ညာသည် တာလတ်နှင့် တာဝေးပြေး အားကစားသမားများအတွက် ထင်ရှားသည်။ ကင်ညာသည် အိုလံပစ် ကစားပွဲနှင့် ဓနသဟာယနိုင်ငံများ ကစားပွဲတို့ အတွက် အမျိုးမျိုးသော အကွာအဝေးတို့အတွက် ချန်ပီယံများကို အမြဲတစေ မွေးထုတ်ပေးလျှက် ရှိပြီး အထူးသဖြင့် မီတာ ၈၀၀၊ မီတာ ၁၅၀၀၊ မီတာ ၃၀၀၀၊ မီတာ ၅၀၀၀၊ မီတာ ၁၀၀၀၀ နှင့် မာရသွန် တို့ ဖြစ်သည်။ ကင်ညာ အာကစားသမားများ အထူးသဖြင့် ကာလန်ဂျင်း လူမျိုးတို့မှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အပြေးပြိုင်ပွဲများအတွက် မော်ရိုကိုနှင့် အီသီယိုးပီးယားတို့၏ ယှဉ်ပြိုင်မှုကြောင့် နေရာ အရ လျော့နည်းသွားသော်လည်း နေရာ အများအပြားကို ရယူထားဆဲ ဖြစ်သည်။ ကင်ညာ၏ ထင်ရှားသော အားကစားသမားများထဲတွင် ဘော့စတွန် မာရသွန် ချန်ပီယံဆု နှစ်ကြိမ်နှင့် ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ နှစ်ကြိမ် ရရှိထားသော ကက်သရင်း ဒရဲဘာ၊ ယခင် မာရသွန် ကမ္ဘာ့စံချိန် တင်ခဲ့သူ ပေါလ် တာဂတ် နှင့် ဂျွန်ဂူဂီတို့ ပါဝင်သည်။
နောက်ပိုင်းတွင် ကင်ညာ အာကစားသမား အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ကင်ညာကစားသမား အမြောက်အများ ဘက်ပြောင်းခြင်းဖြင့် ကြုံတွေ့နေရပြီး အထူးသဖြင့် ဘာရိန်းနိုင်ငံ နှင့် ကာတာနိုင်ငံများသို့ ဖြစ်သည်။ ကင်ညာ အားကစား ဝန်ကြီးဌာနက ဘက်ပြောင်းခြင်းကို တားဆီးရန် ကြိုးစားသော်လည်း ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေဆဲ ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး အနေဖြင့် ဘားနတ် လာဂတ်က အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို ကိုယ်စားပြု ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထို့သို့ ဘက်ပြောင်းချင်း အများစုမှာ စီးပွားရေး သို့မဟုတ် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဖြင့် သက်ဆိုင်နေသည်။ အချို့သော ကင်ညာ အပြေးသမားများမှာ နိုင်ငံ၏ အလွန်အားကောင်းသော ကိုယ်စားပြု အသင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန် အရည်အချင်း မမှီနိုင်သော်လည်း အခြားနိုင်ငံများကို ကိုယ်စားပြုရန်မူ လွယ်ကူနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
ကားပြိုင်ပွဲများတွင်မူ ကင်ညာသည် ကမ္ဘာပေါ်တွ်င အခက်ခဲ အကြမ်းတမ်းဆုံးဟု ဆိုစမှတ်ပြုကြသော ကမ္ဘာကျော် ဆာဖာရီ ရယ်လီ ကျင်းပရာ နေရာဖြစ်သည်။  ထိုပြိုင်ပွဲမှာ ကမ္ဘာ့ ရယ်လီ ချန်ပီယံ ပြိုင်ပွဲ၏ တစိတ်တဒေသအဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် ငွေကြေး အခက်အခဲကြောင့် ဖယ်ချန်ထားခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ကင်ညာမှ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ရယ်လီ ကစားသမားများမှာ ထိုပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အနိုင်ရခဲ့ဖူးသည်။ ထိုရယ်လီ ပြိုင်ပွဲမှာ အာဖရိက ရယ်လီ ချန်ပီယံ ပြိုင်ပွဲ၏ တစိတ်တဒေသ အဖြစ် နှစ်စဉ် ကျင်းပမြဲ ဖြစ်သော်လည်း လာမည့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကမ္ဘာ့ ရယ်လီ ချန်ပီယံ ပြိုင်ပွဲသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့် ရရှိရန် မျှော်လင့်လျှက် ရှိကြသည်။
ကင်ညာသားတို့သည် တစ်ရက်လျှင် သုံးနပ် စားကြပြီး မနက်ခင်းတွင် မနက်စာ၊ နေ့ခင်းတွင် နေ့လယ်စာနှင့် ညဘက်တွင် ညစာတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအတွင်းတွင် မနက် ၁၀ နာရီ လက်ဖက်ရည်ချိန် နှင့် ညနေ ၄ နာရီ လက်ဖက်ရည်ချိန် တို့လည်း ရှိသည်။ နံနက်စာတွင် လက်ဖက်ရည် သို့မဟုတ် ယာဂုနှင့် ပေါင်မုန့် ၊ ချာပါတီ၊ မာဟာမရီ၊ အာလူးပြုတ် သို့မဟုတ် ကန်စွန်းဥပြုတ် တို့ကို စားသုံးလေ့ ရှိကြသည်။ နေ့လယ်စာနှင့် ညစာ အတွက်မူ လူ အများစုမှာ အူဂါလီ နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ နို့ချဉ်၊ အသား၊ ငါး သို့မဟုတ် အခြားသော ပြုတ်ချက်စာများ ကို စားသုံးကြသည်။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ Central Intelligence Agency (2012)။ Kenya။ The World Factbook။ 28 May 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇.၀ ၇.၁ Ehret, C. (2002) The Civilizations of Africa:aHistory to 1800, University Press of Virginia, ISBN 081392085X.
↑ ၁၃.၀ ၁၃.၁ Ehret, C. (1998) An African Classical Age : Eastern and Southern Africa in World History, 1000 BCE to 400 CE., University Press of Virginia, Charlottesville, pp. xvii, 354, ISBN 0813920574.
↑ Wonders of the African World။ Public Broadcasting Service။ 16 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Alsayyad, Nezar (30 March 2001). Hybrid Urbanism. Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0-275-96612-6။
↑ ၂၄.၀ ၂၄.၁ Encyclopædia Britannica
↑ ၂၅.၀ ၂၅.၁ ၂၅.၂ ၂၅.၃ R. Mugo Gatheru (2005) Kenya: From Colonization to Independence, 1888–1970, McFarland, ISBN 0786421991
↑ Ismaili muslim။ Magicalkenya.com။ 16 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၁.၀ ၃၁.၁ Maloba, Wunyabari O. (1993) Mau Mau and Kenya: An Analysis of Peasant Revolt, Indiana University Press, 0852557450.
↑ (1992) Society. Nyamora Communications Limited, 12။
↑ "Kenya", in Moreno, Pedro C.: Handbook on Religious Liberty Around the World. The Rutherford Institute။
↑ ၄၁.၀ ၄၁.၁ "Kenya's Elections 2002 – The Dawning ofaNew Era?" (2003). African Affairs 102 (407): 331–342. doi:10.1093/afraf/adg007.
↑ ၅၃.၀ ၅၃.၁ ၅၃.၂ Samir Elhawary (2008) Crisis in Kenya: land, displacement and the search for 'durable solutions' Overseas Development Institute
↑ Agreement on the Principles of Partnership of the Coalition Government။ Kenya National Dialogue & Reconciliation။3June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆၁.၀ ၆၁.၁ Raghavan, Sudarsan, "In snub to Washington, Kenyan president visits China, Russia first", Washington Post, 17 August 2013. Ambassador Liu's comments at capitalfm.co.ke linked to here . Retrieved 18 August 2013.
↑ Kenya’s economic growth prospects hang on exports, says World Bank – Money Markets. businessdailyafrica.com. Retrieved on9August 2013.
↑ ၆၄.၀ ၆၄.၁ ၆၄.၂ ၆၄.၃ ၆၄.၄ Country Profile: Kenya။ Federal Research Division။ Library of Congress (June 2007)။ 23 April 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇၅.၀ ၇၅.၁ Country profile report – Kenya။ United Nations (2009)။
↑ ၇၇.၀ ၇၇.၁ Asongu, J. J. and Marr, Marvee (2007). Doing Business Abroad: A Handbook for Expatriates. Greenview Publishing Co., 12 & 112. ISBN 0979797632။
↑ Proquest Info & Learning (COR) (2009). Culturegrams: World Edition. Proquest/Csa Journal Div, 98. ISBN 0977809161။
↑ Brown, E. K.; Asher, R. E. and Simpson, J. M. Y. (2006). Encyclopedia of language & linguistics, Volume 1, Edition 2. Elsevier, 181. ISBN 0080442994။
↑ ၈၈.၀ ၈၈.၁ Wycliffe Ambetsa Oparanya (31 August 2010) 2009 Population & Housing Census Results။ 13 November 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 August 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။. Ministry of State for Planning. knbs.or.ke
↑ The World Reformed Fellowship – Promoting Reformed Partnerships Worldwide – News. Wrfnet.org. Retrieved on 16 April 2013.
↑ Largest Baha'i Communities။ Adherents.com။ 26 June 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ CIA World Factbook: HIV/AIDS – Adult Prevalence Rate Rankings. Cia.gov. Retrieved on 23 April 2012.
↑ UNAIDS World AIDS Day Report 2011.
↑ ၁၀၄.၀ ၁၀၄.၁ ၁၀၄.၂ Education။ Ministry of Information and Communications။ Government of Kenya။ 23 April 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀၈.၀ ၁၀၈.၁ IAAF: Changes of Allegiance 1998 to 2005.
↑ US fast food chain to open first Kenya outlet in August – Money Markets. businessdailyafrica.com. Retrieved on9August 2013.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကင်ညာနိုင်ငံ&oldid=539814" မှ ရယူရန်
၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၉:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၉:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။